July 2016 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Christ Leo at 1:27:00 PM 0
များများမှာသုံးထားတာတော့အောက်မှအပေါ်သို့"Back To Top"ဘဲများပါတယ်၊ဒါလေး
ကတော့ Icon ကအလယ်မှာပါအောက်ဘက်လည်းဆင်းလို့ရတယ်အပေါ်လည်းတက်လို့
၂။ Page Elements.
၃။ AddaGadget.
အောက်က Code ကိုထည့်လိုက်ပါ။
" href="#" rel="nofollow" title="Back to Top">
<img style="border:0;" src="http://i31.tinypic.com/2vtqqt3.png"/></a>
" href="#GoDown"><img                                     style="border:0;
၃။Expand Widget Template’ကိုမှန်ခြစ်ပေးပါ။
အောက်က Code ကိုရှာပါ
၄။Save Template button.နိုပ်ပါ ပြီးပါပြီ။။။
Christ Leo at 3:25:00 PM 0
Click Layout>>Add Gadget>>HTML/Java Script
Ko Lin at 5:41:00 PM 0
Movavi Video Converter 16.2.0 ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ။
ဒီကောင်လေးကတော့3D, Movavi, Video , တွေကို အကောင်းနှင့်
အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Converter လေးပါ။ Extract Audio​ တွေနှင့် Create GIFs​ အပါအဝင်
များစွာသော လုပ်ဆောင်မူတွေ ပါဝင်ထားတဲ့ Software ကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်း အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့လည်း ဒေါင်းလင့်ဖိုင်ထဲ့မှာ
( Crack ) ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Ko Lin at 5:38:00 PM 0
Photodex ProShow Producer 8 ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ။
Video Editing တွေနှင့် Slideshows တွေကို အကောင်း ပြုလုပ်နိုင်တဲ့
Photodex ProShow Producer 8 အပြာရောင်လေး Software ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Software လေးက Video Editing, ဝါသနာရှင် သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
အကောင်ဆုံး ဆောင်ထားသင့်တဲ့Software လေးပါဗျာ။
Video Editing တွေမှာ မိမိစိတ်တိုင်းကျ Design တွေကို ဖန်တီးပြီး အလှပဆုံးသော
Video တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီ။ အကောင်းဆုံးသော Editing တစ်ခုပါ ။
( Crack )ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Ko Lin at 5:36:00 PM 0
Photodex ProShow Gold 8 ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ။
Video Editing တွေနှင့် Slideshows တွေကို အကောင်း ပြုလုပ်နိုင်တဲ့
Photodex ProShow Gold 8 ရွေရောင်လေး Software ဖြစ်ပါတယ်။
Windows အားလုံးအတွက် [Activator-All In One Tool] |10.6MB
Ko Lin at 5:33:00 PM 0
Activator For Windows 10 All,8.1,8,7 and Office 2007,2010,2013,2016.
[PC Install + Portable Install]
Windows Activator မဖြစ်ကြသေးတဲ့ သူတွေ အတွက် Windows အားလုံးအတွက် [Activator-All In One Tool] Windows အားလုံးအတွက် အားလုံကို စုစည်းပြီ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက် Update လေးတွေပါ..။
ကျွန်တော် တို့Windows အသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာ Activate မဖြစ်သေးရင်ဒီ Software လေးနဲ့ Activate အလွယ်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..။
Office 2010,2013, နဲ့ Windows Vista,7, 8 , 8.1,10 နဲ့ အခြားသော
Microsoft OS တော်တော်များ များကို [Activator-All In One Tool] လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်။
1/Windows7AllActivator
2/ Windows 8, 8.1, & Office 2007, 2013 [Install]
3/Windows 8, 8.1, & Office 2007, 2013, 2016 [portable]
4/Windows 10 All Activator
Sony All Devices များစွာအတွက် Sony All In One Flash & Firmware Tool 
Ko Lin at 5:31:00 PM 0
Sony All Devices များစွာအတွက် [All In One Tool] လေးကို
ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Sony Flash အစုံအပါအဝင် Drivers တွေလည်း
ပါဝင်ထားပြီ အလွယ်ဆုံး Firmware တင်နိုင်အတွက်လည်း
အဆင်ပြေဆုံး Tool ဖြစ်ပါတယ်။ Sony All Devices များအတွက် ဆောင်ထားကြပေါ့။
အသုံးပြု လိုအပ်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Xiaomi Devices များစွာအတွက် မြန်မာဖောင့်အပါအဝင် များစွာအတွက်ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ [All In One Tool]
Ko Lin at 5:29:00 PM 0
[All In One] [TWRP] [Stock Recovery] [Zawgyi] Xiaomi Mi 4c Toolkit for Myanmar
Xiaomi Devices များစွာအတွက် မြန်မာဖောင့်အပါအဝင် များစွာအတွက်ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ [All In One Tool] လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးပြုနိုင်တာတွေကတော့ အောက်မှာ လေ့လာပြီ အသုံးပြု လိုအပ်သူများ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
[You can do following with this tools]
1. Zawgyi Lollipop font (Root)
2. Zawgyi Lollipop font (without Root)
4. Flash Stock Recovery
5. Boot TWRP (Temp)
This tool is created before Xiaomi Mi 4c Bootloader Locked since no need to Unlock. Now, you need to
unlock if you want to use Zawgyi font Replace (without Root)
. Also, need to unlock to Root your Xiaomi Mi 4c.
Ko Lin at 5:25:00 PM 0
MTK Phone-Smart Phone တွေအတွက် Flash Tool အစုံပါဝင်ထားတဲ့
Tool တစ်ခုကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Qualcomm Phone ပါဝင်တယ်။
လိုအပ်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Pattern နှင့် Unlock တွေကို ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ -Unlocker Tool
Ko Lin at 5:23:00 PM 0
Pattern နှင့် Unlock တွေကို ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Unlocker Tool လေးပါ။
Tool အသုံးပြုရန် အတွက်လည်း Drivr auto installer တွေ ပါဝင်ထားပြီ အခြားသော
လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အများကြီး ပါဝင်ထားပါတယ်။
မိမိရဲ့ဘလော့Comment အရေအတွက် Bubble Icon လေးနဲ့ပေါ်စေချင်ရင်
Christ Leo at 11:28:00 AM 0
မိမိရဲ့ဘလော့Postတခုစီရဲ့အပေါ်မှာ Comment အရေအတွက် Bubble Icon လေးနဲ့ပေါ်
အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပါ၊တချို့Template မှာကြတော့ Autoပါလာတယ်၊ထည့်နည်းလေးကတော့
၂။ edit HTMLထပ်နိုပ်ပါ၊
၃။Expand Widget Templatesကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ၊
background : url(http://i43.tinypic.com/dljpzo.jpg) no-repeat;
အနီ ရောင် Code တွေကိုထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ
<h3 class='post-title entry-title'><b:if cond='data:post.allowComments'>
Android Software အတန်းကို Advanced only ပဲ တက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် လာလို့ ရပါပီ..
Min Oaker at 10:33:00 AM 0
ကဲ 28.7.2016 ရက်နေ့မှာ စတင်သင်ကြားပေးမယ့် (၁၅) ရက်စာ Android Advanced Course (Section 2) အတွက် လာလို့ရပါပီ..
ဒီတစ်သုတ် အတွက်ကတော့ Course တွေလည်း နည်းနည်းပြန်ပြင်ပေးထားသလို data တွေလည်း ပြန်စုထားပေးပါတယ်. Advanced အတွက်ဆိုပေမယ့် နည်းနည်းပါးပါး ပါဗျာ.သိပ်လည်း အများကြီး မသင်ပေးတတ်ပါဘူး. တစ်ချို့တွေက သင်တန်းမတက် ဘဲ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလာတဲ့ လူတွေ ရှိတယ်..နယ်ကလူတွေ ရောပေါ့ သူတို့လိုလူတွေကို အထောက်ပံ့ပေးတဲ့အနေနဲ့ လိုအပ်တာတွေ data ကအစ ပေးသွားစေချင်တာပါ. နောက်ပီး Andvanced တက်ချင်တယ်ဆိုပီး ပြောထားတဲ့သူတွေ အတွက် အချိန်အနည်းငယ် နဲ့
သင်ပေးမယ့် Course တွေက ဘာတွေလဲ ???
- Huawei Firmware Upgrade From PC with Update.app
- Sony Firrmware Extraction & Flashing..
- Huawei , HTC , Sony Official Bootloader Unlocking...
- MTK,SPD Firmware Backup and Restore
- MTK Firmware installatiion Error Solution
- Error Fixing Using Box Crack & Installation (miracle,z3x,octopus,..)
- MTK,Qualcomm IMEI invalid,baseband unknown Solution
- Samsung IMEI Null & Baseband Unknown FIx
- Xiaomi , Meizu , Samsung , Huawei Pattern , Pass, Pin lock Unlock
- Qualcomm Board Firmware installation
- Xiaomi Edl FIrmware Flashing, From 9008 mode
- Samsung, Huawei, HTC , Sony >Leastest 2016 FRP Lock Reset (with PC)
ဒါ့အပြင် ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတော်တော် များများ 64 bit တွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက်
တစ်ချို့ တစ်ချို့သော ဖုန်းတွေ (Xiaomi, etc..) ဆိုရင် 64 Bit မှာပဲ အဆင်ပြေပါတော့တယ်. ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲမှာ Window 23 bit & 64 bit ဘယ်လို တင်ရမလဲ
ဆိုတာပါ လက်ဆောင် အနေနနဲ့ သင်ပေးသွားမှာပါ..
တစ်ယောက်ကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှုန်းဖြင့် သင်ကြားပေးပါ့မယ်
ကိုယ်တိုင် ကွန်ပျူတာ ရှိလို့ ယူလာရင်လည်း ရပါတယ် (ပိုပီး အဆင်ပြေတာပေါ့)သင်တန်းပီးဆုံးသွားပါက Data 2T (2000GB) ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်)
သင်တန်းသား ၆ ယောက်သာ တစ်ဖြတ်မှာ လက်ခံပါတယ်
တနေ့ကို အချိန် ၂ နာရီ သင်ကြားပေးပါတယ် ပိတ်ရက်မရှိပါ..
သင်တန်းပီးဆုံးသွားတဲ့အခါလည်း အခက်အခဲ မရှိစေရန်အတွက် Advanced တက်ထားတဲ့သူတွေအတွက် Solution Group လေး ဖွင့်ထားပေးပါတယ်.
နားမလည်တာ ရှိရင် ၀င်မေးလို့ ရပါတယ်..
ဆက်သွယ်ရန်.. Min Oaker
PC ကွန်ပြူတာတွေအတွက် 10TB hard drive အသစ်ကို Seagate မိတ်ဆက်
U Oo Cracker at 1:09:00 AM 0
ဆာဗာစက်တစ်လုံးဆင်ဖို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ တဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့ Steam library အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် storage အများဆုံး hard drive တစ်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Seagate ရဲ့ hard drive အသစ် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
အမေရိကန်အခြေစိုက် data storage ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Seagate ဟာ 10TB ဆံ့ hard drive သုံးမျိုးကို တနင်္ဂနွေနေ့က စတင်မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 10TB hard drive သုံးမျိုးမှာ နှစ်ခုက network ပိုင်းနဲ့ လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်မှုစနစ်အတွက်ဖြစ်ကာ၊ နောက်မော်ဒယ်တစ်ခုကတော့ အိမ်သုံး desktop ကွန်ပြူတာတွေ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Barracuda Pro hard drive အသစ်တွေဟာ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုများတာကလွဲလို့၊ တခြားထူးခြားချက်ကတော့မရှိဘဲ၊ သာမန် ၃.၅ လက်မအရွယ် 7200RPM SATA HDD တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေတာသိမ်းဆည်းနိုင်မှုများသလို၊ ဈေးနှုန်းကလည်း တော်တော်များပြီး၊ 10TB BarraCuda Pro တစ်လုံးကို ၅၃၅ ဒေါ်လာလောက် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 5TB storage နှစ်လုံးကို လက်ရှိမှာ ၃၈၀ ဒေါ်လာလောက်နဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်တာကြောင့်၊ မဆိုးဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Firmware ကျကျ ၊ မကျကျ Samsung အားလုံးကို Region 100% မှန် ရွေးနည်း
U Oo Cracker at 12:52:00 AM 0
မသိသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်တော်သိသလောက်လေး Share တာပါ
... Region မှားပြီးတင်ရင် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ ...
Firmware ကျနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် မကျသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် Recovery ဝင်ရင် CSC-Code ကို
မြင်ရမှာပါ Custom Recovery သွင်းထားရင်တော့ အောက်ကနည်းအတိုင်းဆက်လုပ်ပါ
Phone Info SAMSUNG apk ကို Play Store မှာ free down လို့ရပါတယ်
firmware မကျသေးရင် အဲဒီ APK တင်ပြီးလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်
.... Active CSC Code က firmware region ပါ...
Available CSC code က မူရင်း region မဟုတ်ပေမဲ့ တင်လို့ရတဲ့ region တွေပါ
သူပြထားတဲ့ region တင်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ဒီလိုမျိုး region တစ်ခုပဲရရင်တော့
အခြား region တင်ရင်တော့ သေပြီပဲ... :P
ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ဒီ region မရှိလည်း ရနိုင်တဲ့
region firmware ရှိနေရင် ရဲရဲကြီးသာတင်ပါ
နောက်တစ်နည်းက Kies ကို သုံးပြီးရှာတာပါ Battery အောက်မှာ
ရေးထားတဲ့ Model နဲ့ S/N နံပါတ်ကို မှတ်ထားပါ
Kies က Firmware Upgrade and Intialisation ကိုရွေးပါ
Credit: Nann Oo
Re-Credit To... (www.zunite.org)
Huawei P8 Lite B530 ဖုန်းကို Stock Android 6.0 OTA Rom တင်နည်း- by CHAN LAY (MCMM)
U Oo Cracker at 12:50:00 AM 0
Huawei P8 Lite B530 ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ ညီအကိုတွေအတွက်
အသစ်တက်လာတဲ့ Stock Android 6.0 OTA Rom တင်နည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းအတွက် Marshmallow v6.0.1 ဗားရှင်းက 16.July.2016 ရက်နေ့မှာ
ထပ်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ Update Version ချစ်သူများအတွက် အကြိုက်
Build-No ကတော့ B530 ဖြစ်ပြီး Region တော့ Russia ဖြစ်ပါတယ်
ဖိုင် Size 1.45 GB ရှိတာမို့ လိုင်းကောင်းတုန်း ဒေါင်းလော့ရယူလိုက်ပါ။
Firmware Versions :- B530
Huawei P8 lite :- ALE-L21
Release Date :- 16.July.2016
Firmware :- ALE-L21C10B530
Size :- 1.45 GB
Download B530 Rom For Huawei P8 Lite
Firmware တင်နည်း (၁)
၁။ ROM & Data များကို Backup ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါ။
၂။ ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ OTA zip ဖိုင်ကိုဖြည်လိုက်ပါ။
၃။ 'dload' ဖိုင်ကို SD Card သို့ Copy ကူးထည့်လိုက်ပါ။
၄။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီး “Volume Up + Down + Power များကို
၅။ ဖုန်းမှာ Auto Update ပြုလုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၆။ Flash Process ပြီးသွားတဲ့အခါ ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်
ပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ Update Version ဖြင့် လန်းနေပါပြီ။
Firmware တင်နည်း (၂)
၁။ Firmware OTA zip ဖိုင်ကိုဒေါင်းလော့ပြီး zip ဖြည်လိုက်ပါ။
၂။ Firmware folder ထဲမှ 'dload' ကို SD Card သို့ ကူးထည့်ပါ။
၃။ Dial Pad (ဖုန်းခေါ်သည့်နေရာ) ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး
အေက်ပါ နံပါတ်များကို မှန်အောင် ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
“ *#*# 2846579#*# * ”
၄။ Software Upgrade ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင်
SD Card Upgrade သို့သွားလိုက်ပါ confirm ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၅။ ဖုန်းမှာ Flash process ကို စတင်ရေးနေပါလိမ့်မယ်။
၆။ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ Update Version ဖြင့်လန်းနေပါပြီ။
မှတ်ချက်။ Boot စတက်တဲ့အခါ 5-10 မိနစ်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။
Special Credit ===> ဇူးနစ်(နည်းပညာ)
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးကို WHO ပထမဆုံးအကြိမ် အသိအမှတ်ပြု
U Oo Cracker at 4:15:00 PM 0
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး (WHO)က ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Dengvaxiaဟု အမည်ပေးထားသည့် ကာကွယ်ဆေးသည် ပြင်သစ် အခြေစိုက် Sanofi Pasteur သုတေသန ဌာန၏ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကြာ ကြိုးစား သုတေသနပြုမှု၏ ရလဒ်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ခြင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများတွင် ကလေးငယ်များအတွက် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလောက်သည်အထိ ခြိမ်းခြောက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
လတ်တလောတွင် Dengvaxiaကို မက္ကဆီကို၊ ဘရာဇီးလ်၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒိုးနှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့က တရားဝင် မှတ်ပုံတင် တင်သွင်းခွင့် ပေးထားပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကုန်တွင် WHOက ထောက်ခံချက် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် Dengvaxiaကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အမြောက်အမြားသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် လမ်းပွင့်သွားစေခဲ့သည်။
“ခြင်အရေအတွက် ထူထပ်ပေါများတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဟာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ရောဂါတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အတိုင်းအတာနဲ့ ကူးစက်မှု အခြေအနေက မြင့်တက်လာတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ တစ်ခုအသွင်ကို ပြောင်းလဲဖို့ အခြေအနေကို ဦးတည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု WHO၏ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး စီမံကိန်းဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ အင်ကျူယွန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခု ကာကွယ်ဆေးက တစ်နှစ်တာအတွင်း သုံးကြိမ် ထိုးနှံရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးသည် ယခင်က သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားဖူးသည့် အသက် ၉ နှစ်အထက် ကလေးများပါ ထိုးနှံနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Dengvaxiaသည် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကူးစက်မှု ပေါ်ပေါက်နေသည့် နေရာမျိုးတွင် နေထိုင်သူများ၊ ထိုနေရာမျိုးသို့ ကာလတို သွားရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် အထူးသင့်တော်ကြောင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေနသနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဌာနခွဲမှ ဒေါက်တာ အလိန်း ဘူကန်ငူးက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်စဉ်က အဆိုပါ ဆေးဝါးသည် အရှေ့တောင်အာရှနှင့် လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံများတွင် အာနိသင် ထက်မြက်မှု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံတက် ကုသမှု ခံယူနေချိန်တွင် ထိုးနှံမှုများ၌ ၉၀ မှ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ အစွမ်းထက်ခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များ အနေဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ပြီးပြည့်စုံသည့် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးမျိုး တီထွင် ထုတ်လုပ်ရန်မူ အခက်တွေ့နေဆဲ ဖြစ်သည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးတွင် မျိုးကွဲ လေးခုထိ ရှိနေပြီး ကလေးများအတွက် အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် အခြားရောဂါများဖြစ်သော ပိုလီယို၊ ရေကျောက်တို့ထက် ဖွဲ့စည်းပုံ ပိုမို ရှုပ်ထွေးကြောင်း သိရသည်။
Ref ===> Time
Huawei Mate S B355 ဖုန်းကို Marshmallow တင်နည်း - by CHAN LAY (MCMM)
U Oo Cracker at 4:08:00 PM 0
Huawei Mate S B355 ဖုန်းကို Marshmallow တင်သုံးချင်တဲ့
ဒီဖုန်းအတွက် Marshmallow v6.0.1 ဗားရှင်းက
14.July.2016 ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Build-No B355 ဖြစ်ပြီး Region ကတော့ Middle East ဖြစ်ပါတယ်
ဖိုင် Size 1.50 GB လောက်ရှိပါတယ်၊ လိုင်းကောင်းတုန်းရယူပါ။
Huawei Mate_S Firmware Details
Firmware Versions :- B355
Huawei Mate S :- CRR-UL00 (L13)CRR-UL00 (L13)/CRR-UL20
Release Date :- 14.July.2016
Firmware Build No:- CRR-UL00C185B355/CRR-UL20C185B355
Region :- Middle East
Country :- Kuwait
Size :- 1.50 GB/1.50 GB
The update works with the versions
Download Needed for!
Ascend G7 B530 ဖုန်းကို Stock Android 6.0 OTA Rom တင်နည်း - by CHAN LAY (MCMM)
U Oo Cracker at 3:36:00 PM 0
Ascend G7 B530 ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ညီအကိုတွေအတွက်
အသစ်ထပ်တက်လာတဲ့ Stock Android 6.0 OTA Rom တင်နည်းကို
ဒီဖုန်းအတွက် Marshmallow v6.0.1 ဗားရှင်းကတော့ 14.July.2016 ရက်နေ့မှာ
အသစ်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ Official Rom ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချဖြင့်
တင်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ Build No-B530 ဖြစ်ပြီး ဖိုင် Size 1.43 GB ရှိတာမို့
အလိုရှိတဲ့သူတွေကတော့ လိုင်းကောင်းတုန်းလေး ဒေါင်းလော့ရယူထားလိုက်ပါ။
Ascend G7 :- G7-L01
Firmware :- G7-L01C464B530
Region :- Asia Pacific
For Download Needed!
Download B530 Rom For Ascend G7
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H ဖုန်း ဗားရှင်း Android 4.4.4 Root လုပ်နည်း - by CHAN LAY (MCMM)
U Oo Cracker at 3:25:00 PM 1
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H ဖုန်းအတွက်
ဗားရှင်း Android 4.4.4 Root လုပ်နည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းအတွက် Android 4.4.4 ဗားရှင်းကိုလည်း နာမည်ကြီး
CF-Auto-Root package ဖြစ့် Odin ကနေ One Click ဖြင့်ပြီးတယ်
CF-Auto-Root tool for the Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H
CF-Auto-Root ဖိုင်ဖြင့် Root လုပ်နည်း
ဖုန်းမှာ USB Debugging mode ကို Enable ပြုလုပ်ပါ။
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin & Root zip ကိုဖြည်လိုက်ပါ
Odin ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး PDA ဆိုတဲ့နေရာမှာ CF-Auto-Root ဖိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
ဖုန်းကို Download mode သွင်းလိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Download mode ၀င်ပြီဆိုရင်တော့ computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ PASS ပြပြီးဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်
ပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ Root access ရရှိနေပါပြီ
Root Checker ဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။